Linux Mint 19.1 Tessa yave kuwanikwa nekuvandudza kukuru | Kubva kuLinux
Linux Mint 19.1 Tessa ikozvino yawanikwa pamwe nekuvandudza kukuru
Una nyowani vhezheni yeLinux Mint inowanikwa yekurodha pasi, uye kuburitswa kunouya nerunyorwa rurefu rwekuwedzeredza, senge rutsigiro rwakawedzerwa kuburikidza na2023.
Linux Mint 19.1 Tessa XFCE Shanduro iri yakavakirwa paUbuntu 18.04.1 LTS Bionic Beaver uye inomhanya pasi peCinnamon 4.0 giraidhi nharaunda.
Zviripachena, kuve kusunungurwa kukuru, rondedzero yeshanduro yakareba kwazvo uye pakati pekuvandudza kwakanyanya kunosanganisira dhizaini nyowani yesoftware Fonts chishandiso ine Xapp sidebar uye mutsva menyu menyu, mitauro uye nzira marongero. sekumwe kunatsiridza kweXapp.
Semuenzaniso, Xreader ine nyowani gwaro rinoona, nepo iyo Xed chinyorwa mupepeti yakazo gadzira iyo libpeas, python3 uye MESON.
Linux Mint 19.1 inouya ne Linux-firmware 1.173.2 uye Linux Kernel 4.15.0-20 uye inosanganisira shanduko idzo dzinofanirwa kuita kuti iro rekupinda rive nyore kushandisa. Iye zvino Sudo yatove kuratidza maostisks kana iwe uchinge waisa password uye iyo yekumusoro skrini inoratidza iyo firewall yekumisikidza hwindo iyo iyo inoita kuti iwe utsanangure iyo mitemo kubva pakutanga.
Zvirongwa zveSystem yeLinux Mint 19.1 Tessa
Nezve system zvido, Linux Mint inoramba iri inonakidza kugovera sezvo uchikwanisa kuiisa pane yekare hardware.
Kushanda zvinongoda 1GB ye RAM, kunyangwe 2GB inokurudzirwa uye resolution ye1024 × 768 pixels. 15 GB inodikanwa kuti ichengeterwe.
Linux Mint ndeimwe yenzvimbo dzakasarudzika dzevashandisi veWindows, zvizhinji izvi zvinokonzerwa neruzivo rwayo uye zviri nyore kunzwisisa mashandisirwo. Iyi vhezheni nyowani ichaita kuti shanduko ive nyore kwazvo kune avo vari kuronga kusiya Microsoft sisitimu yekushandisa kumashure, saka kana iwe uri kuronga kushandura, iyi inogona kunge iri sarudzo yakanaka kuyedza. Unogona kurodha Linux Mint 19.1 Tessa kubva ku peji yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Linux Mint 19.1 Tessa ikozvino yawanikwa pamwe nekuvandudza kukuru
Razer anokupa mubairo wekushandisa yako isina basa GPU
Slimbook Eclipse: nyowani yakasarudzika nzvimbo yekushandira uye mitambo